Posted on 14th July 2017 by khadar
Muuqaal ahaan markaad ku eegto indho caafimaad qaba, waxa ay maskaxdaadu soo celinaysaa inuu magaalada nin waalan ka qoran yahay, balse waa aqoonyahan ilaahay ku manaystay hadal-yaqaanimo iyo bulsho dhexgal. Wuxuu xidhan yahay koofiyad noocan fooda hore dheer, badh ka mid ah timihiisa oo raamo ah ayaa dul saaran labada dhagood, wejigiisa waxa ka sookeeya hadh madow, oo way adagtahay inaad si dhamaystiran u aragto wejigiisa, madow aw-geed. Wuxuu soo saaray laba indhood oo aad moodo in lagu dhibqiyey isbiirtada cas. Shaadh isku darsaday uskag iyo jacdad ayuu si qaab daran u xidhan yahay.
Surwaal qaybta hoose waxa googooyey kabaha, oo xaga hoose ka maray labada kabood ayuu ku lebisan yahay, oo miyuu surwaalka kor u qaad sowkan xaga hoose ka madhay isagoo cusub? Mooyi malaha isagaa inooga jawaabay. wuxuu noogu soo galay Hool aan ku haynay hawl aqooneed oo bulsho badan kulmiyey. Markuu ka soo galay albaabka ayuu markiiba lugta ku dhuftay koob madhan oo shaah laga cabbay oo kuraasta ag-yaalay, shanqadhii koobka iyo muuqiisa madow ayaanu hal mar wada eegnay. Halkii uu burburka koobka ka qaadi lahaa ayuu soo saaray ilko madoobaaday oo aad moodo dhuxul girgire saaran, markaasuu yidhi” kana maxaa na hordhigay.” Wuxuu fadhiistay meel aan naga fogayn.
Nin aqoon fiican u leh, ayaan si hoose iigu yidhi” ninkaa aad ka naxaysid muuqiisa waa aqoonyahan aan laga xiiso goyn markuu afka kala qaado.” Haye. Markaa maxaa sidan u galay, ee uu isu-habayn waayey, ayaan su’aalay. Wuxuu iigu af-celiyey “ wadanaha ayaa igu caddaaday, sidii aan wax ugu sheegayey. Mid wax qaaadanaya maaha, dhiiga laga qaad “, ayuu sii niyad jab ah iigu qanciyey. Weliba waxa soo gala lacag fiican nolol ahaan, balse wuxuu lacagtaasi u leexiyaa meelo aan laga sheekayn Karin, ayuu ii raaciyey. Waan gartay, waxa aan filayaa hadhkan ka sookeeya waxa sababay maydhasho la’aan iyo cibaado la’aan is-biirsatay.
Haa walaal waa sidaasi, waxa aan kaga yaabay heerka uu tumashada ka gaadhay waa ninka aaminsan caqiido ku aroorta diin iyo dadnimo la’aan, taaso dhiiragelisa macsida, oo ah waa inaad sii daysaa baahidaada labnimo. Acuudu bilaa, iimaanka lagaa qaad, waar inaga daa yeynaan dambi ka shaqaysane. Muddo ka dib ayuu la wareegay makarafoonkii lagaga hadlayey madal aqooneedii. Qacdii hore ee araga la yaab, oo si hoose loo xamay, muxuu ahaa qofkani?. Mooyi. Dee kani malaha caadi maaha, oo waa cilaaj ( waali)?, maya marka hore aynu sugno. Oo kan inkaartii ayaa ka soo if-baxday, bisinka, sug ha ka hordhicin, aynu eegno, sowtii hore loo yidhi” barasho horteed ha I nicin”.
Waa runtaa, adigaa iga hagaagsan. Mise bilowgii hore ayuu ku yidhi hadallo isku toosan oo tusaale iyo aqoon ku dhan tahay. Fajac oo muu hore noogu yimaado, waa intii naga dhinayde. Tusaalihii hore ee uu bixiyey, ayuu ku bilaabay “ aqoontu maaha hadaf, balse waa shay hadafka lagu gaadho. Siduu yidhi Hilter. Laakiin inaga (Soomaalida) ayaa u fahanay aqoontu inay tahay hadaf, waan halkay sartu ka qudhuntay ee ay tahay in boogaha laga dhayo.” Cajiib bal eega siday aqoontu uga soo burqanayso, si hoose ayaan isha u mariyey bulshadii madasha ku sugnayd mise waa dadkii oo aad moodo inuu sayloon ku socdo, oo aan dhaqdhaqaaq lahayn. Mar kale ayuu dhalinyartii dareensiiyey inay noloshu tahay tiir dhexaad, wuxuu tusaale u soo qaatay oo uu yidhi” nin Proffessor ah, ayaa la weyddiiyey, waa maxay noloshu? Wuxuu ku jawaabay, noloshu waa tartan ee isku day inaad ku guulaysatid. Sacab badan ayaa u dhacay hadalkaasi.
Ka dib waxa hadalkiisa laga dareemayey inay dhuuntu qaalashay, oo markiiba wuxuu isla-gaadhay biyo, Sababta dhuun qalalka ayaa lagu sheegay inay tahay jaadka iyo soo jeedka habeenkii. Markii uu dhuuntii qooyey, ayuu hadalkiisii sii watay, intuu waxoogaa yara joojiyey ayuu yidhi” malaha waan idin dawakhiyey.” Maya, xaasha, ayaa loogu af-celiyey. Markaasuu yidhi” koley mid hoosta iga karhay la waayi mayo.” Halkaasi inta aynaan ka bixin ayaa waxa dhacday beri ayaa in si weyn loo soo dhaweeyey oo xaflad ballaadhan loo qabtay. Ka dib markii uu soo galay xafladii ee uu doonaayey inuu fadhiisto goobtii loo sii diyaariyey, ayey afar nin oo ka mid ahaa guddigii soo dhawaynaysa ayaa hal mar kor-u-qaaday si farxadeed, mid ka mid ah ayaa xiniinyaha si hoose u jiidayey, markaasuu xannuunsaday, ka dibna wuxuu yidhi” waar I dhiga waan ogaaday, ninba halkuu I hayey.”
Qosol iyo sacab ayaa loogu deeqay, markaa waxa aan uga socdaa kolayba nolosha way ku jirtaa caqabado. Intii aan hadlayey marna ma iga maqasheen eray af-qalaad ah. Af-faranji ha noqdo amma af-carabi? Maya ayaa loogu af-celiyey. Markaasuu yidhi” dad badan oo Soomaali ah waxa ka dhaadhacsan in is-dhexgelinta Af-soomaaliga iyo luuqad shisheeye ay tahay ilbaxnimo iyo aqoon badnaan, balse waa liidasho iyo liciifnimo. Lama diidana inaad barato afafka kale, balse farriintaadu waa inay af-somaali ku baxdaa si bulshada oo dhan u gaadho, haddii aad isku dhex-qasto af-soomaali iyo af-faranji waxa ay farriintaadu gaadhi dadka kii af-faranjiga yaqaan ee fahmaya isku dhex-qaska. Wuxuu intaasi raaciyey, horta Caadifadu miyaanay xudduud lahayn, qofka si adag u doodda, wuu caadifadaysan yahay, kii hadal kulul ku hadlaa wuu caadifadaysan yahay, gabadhii dareen cadho leh muujisaa way caadifaysan tahay… malaha aniguna waan caadifaysanahay. Markii dambe ayuu hadalka ku soo gebagebeeyey, markii hore waad iga sasteen, balse imika waad I aqoonsateen sow maaha. Halkaasi ha inoo joogto.
Previous PostPrevious ‘It wasn’t what I expected, it’s beautiful’: British-Somali youth explore their roots
Next PostNext Sawiro: Sidii loo soo dhoweeyay madaxwaynaha Somaliland Maanta